Vertical Blinds Fabric Vagadziri & Vatengesi - China Vertical Blinds Fabric Factory
China Fekitori Yakawedzera Vertical Blinds Mucheka Nemakwikwi Emitengo
Iwo jira rekupofumadza jira rakatumidzwa nekuti iwo mabhanhire akamiswa akatwasuka akatarisa kumusoro njanji, uye anogona kusununguka kudzikiswa kuruboshwe uye kurudyi kuzadzisa chinangwa che shading. Yakashongedzwa, inoyevedza uye yakajeka mitsara. Yakachena uye yakapfupika. Iwo epamhepo emagetsi anopofumadza anotora chimiro chekuzungunuka, uye iwo machira ejira emachira anogona kutenderedzwa 180 madhigirii. Iyo mota inogona kushandiswa kuzadzikisa kudzikisira uye kudzoreredza kwemapofu kuburikidza neanogadzira nzira yekufambisa. Inogona kugadzirisa mwenje mwenje pakuda, kufefetedza uye kuzadzisa chinangwa che shading.
Yakaomeswa Vertical inopofumadza Mucheka Semi-kudzima magetsi 100% Polyester
Iwo jira rekupofumadza jira rakatumidzwa nekuti iwo mabhanhire akamiswa akatwasuka akatarisa kumusoro njanji, uye anogona kusununguka kudzikiswa kuruboshwe uye kurudyi kuzadzisa chinangwa che shading. Yakashongedzwa, inoyevedza uye yakajeka mitsara. Yakatsvinda uye yakapfupika, iyo yakatwasuka inopofumadza jira rine mashandiro ekuputira inzwi, kupisa kupisa, humboo humbowo uye dziviriro ye ultraviolet. Zviri nyore kuchenesa uye hazvimbofa. Iyo indoor nharaunda yakarongeka zvakarongeka. Kana jira rekupofumadza rakapfigwa kuti rivharise mwenje wezuva, iyo kona inogona kugadziridzwa kunakidzwa nenzvimbo yekunze, iyo inosanganisa runako nekuita. Kune akawanda masitayera evatengi kusarudza.Yakakodzera nzvimbo dzeruzhinji senge dzimba dzemusangano, makamuri eVIP, mahofisi, zvipatara, nezvimwe.
Yakakwira Mhando Vertical inopofumadza Mucheka 100% Polyester Ye Smart Smart
Iyo jira rekupofumadza rakatumidzwa zita nekuti iwo mapanga anomiswa akatwasuka akatwasuka pamusoro penjanji yepamusoro. Iwo epamhepo emagetsi anopofumadza anotora chimiro chekuzungunuka, uye iwo machira ejira emachira anogona kutenderedzwa 180 madhigirii. Iyo mota inogona kushandiswa kuzadzikisa kudzikisira uye kudzoreredza kwemapofu kuburikidza neanogadzira nzira yekufambisa. Inogona kugadzirisa mwenje mwenje pakuda, kufefetedza uye kuzadzisa chinangwa che shading. Iketeni remagetsi rinotwasuka rinobatanidza kushanda, pfungwa yenguva uye kunzwa kwehunyanzvi mune imwe, nekuda kwekudziya, kunaka uye nerupo, rave sarudzo yekutanga yezvivakwa zvehofisi, vamiriri vehurumende nenzvimbo dzeruzhinji.
Multi-mavara Vertical Mucheka 100% Polyester Ine 89mm Hupamhi
Iwo jira rekupofumadza jira rakatumidzwa nekuti iwo mabhanhire akamiswa akatwasuka akatarisa kumusoro njanji, uye anogona kusununguka kudzikiswa kuruboshwe uye kurudyi kuzadzisa chinangwa che shading. Iyo yakajairwa kugadzirisa uye kuchenesa kweyakagadzika mapofu machira anogona kuitwa nenzira dzinotevera: Kudhonza iwo mapofu kazhinji kunogona kudzikisa kuunganidzwa kweguruva uye chiyero. Mukugadzirisa kwakaringana kwemaketeni akamira, iwe unogona kushandisa bhurasho inoshanduka kana dhenga yeminhenga kubvisa guruva. Uye zvakare, iwe unogona zvakare kushandisa yekutsvaira kuchenesa, mhedzisiro yacho ichave iri nani.
Chitsva Chitaera Vertical Blinds Mucheka 100% Polyester Ine 127mm Upamhi
Iwo jira rekupofumadza jira rakatumidzwa nekuti iwo mabhanhire akamiswa akatwasuka akatarisa kumusoro njanji, uye anogona kusununguka kudzikiswa kuruboshwe uye kurudyi kuzadzisa chinangwa che shading. Hunhu hweiyo jira rekupofumadza jira rinozove nekukanganisa kukuru mukushandisa kwemberi, saka kana tichitenga keteni yakatwasuka, isu tinofanirwa kutarisisa mhando yeiyo yakatwasuka inopofumadza machira. Heano mamwe matipi ekutenga yakatwasuka inopofumadza machira:
1.Kana icho chakatengwa chakamira cheketeni chigadzirwa chinoburitsa munhuhwi unopinza, zvinoreva kuti pane yakasaradhihyde masara pane yakatwasuka keteni uye haina kukurudzirwa kutenga;
2.Mushure mekusarudza iyo jira rejira yakatwasuka, zvinokurudzirwa kushandisa yakajeka-yakajeka jira keteni yekushandisa kwenguva refu uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza. Chiedza-chemavara emachira emaketeni anogona kunge ane yakaderera zvakanyanya formaldehyde uye nenjodzi yekumhanyisa njodzi pane yakasviba-yerudzi yakatwasuka maketeni.
Hunhu Guarantee Inogara Vertical Mucheka 100% Polyester Semi-kudzima magetsi
1.Ruvara rwekumusoro keteni rinofanira kuverengerwa neruvara rweyese imba. Kana iyo fanicha yakasviba mune dhizaini, saka keteni yakatwasuka inofanirwa kushandisa zvimwe zvigadzirwa zvine ruvara, kana zvikasadaro mavara akasviba anozoita kuti vanhu vanzwe kuora mwoyo.
2.Iyo yekumira inopofumadza jira dhizaini iri nyore, yakakodzera kune mamwe emazuva ano, akapusa kana eAmerican ekushongedza masitaira. Inokodzera kuisirwa nzvimbo nemahwindo epasi-kune-siringi.
Simplicity Uye Elegance Vertical Blinds Fabric Semi-kudzima magetsi kweHofisi
Iwo jira rekupofumadza jira rakatumidzwa nekuti iwo mabhanhire akamiswa akatwasuka akatarisa kumusoro njanji, uye anogona kusununguka kudzikiswa kuruboshwe uye kurudyi kuzadzisa chinangwa che shading. Yakashongedzwa, inoyevedza uye yakajeka mitsara. Yakatsvinda uye yakapfupika, iyo yakatwasuka inopofumadza jira rine mashandiro ekuputira inzwi, kupisa kupisa, humboo humbowo uye dziviriro ye ultraviolet. Mwese mwedzi mitanhatu, jira rekupofumadza rinoda kutorwa pasi rekuchenesa uye kugadzirisa. Kana uchichenesa, usashandise bleach, kupera mvura uye kuomesa. Rega jira rekupofumadza riome zvakasikwa, zvikasadaro maratidziro ejira rekupofumadza rinokuvara.